मलाई एक रात थुन्न नसक्नेले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई छोएर त हेर : रामकुमारी झाँक्री – ramechhapkhabar.com
मलाई एक रात थुन्न नसक्नेले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई छोएर त हेर : रामकुमारी झाँक्री
नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले आफ्ना अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई छोएर हेर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चुनौती दिएकी छन् । आफूलाई पक्राउ गरेर एक रात थुन्न नसक्ने ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई छुन नसक्ने दाबी उनको छ । ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ नामक टेलिभिजन कार्यक्रममा ऋषि धमलाले प्रचण्डलाई माओवादी लडाकु शिविर र माधव नेपाललाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएर पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेकोबारे प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा झाँक्रीले भनिन्, ‘माधव नेपाललाई ललिता निवास प्रकरणमा जेल हाल्न अख्तियारमा मानिस भर्ती गरेको हो । माधव नेपाललाई छोएर त हेर, माधव नेपाल व्यक्ति होइन, यो मुद्धाको नेता हो नि त । प्रचण्डलाई १७ हजार मारेको कुरा छ नि त्यतिबेला संक्रमणकालीन व्यवस्थामा हामीले संविधानतः के काम गरेका थियौं, त्यो हेर्नुप-यो । प्रचण्डलाई छोएर छोएर त हेर आजको दिनमा । खड्गप्रसाद ओलीको सत्यानास यहींबाट सुरु हुनेछ ।’
माधव नेपाल र प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा गलत निर्णय नगरेको दाबी आफूले गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै झाँक्रीले उनीहरुको तुलनामा ओलीले धेरै ठूलो अपराध गरेको आरोप लगाइन् । ‘प्रचण्ड र माधव नेपाल पुरै शुद्ध मान्छे हो, यो मेरो दाबी होइन । तर, आज खड्गप्रसाद ओलीले जे ठाउँमा पु¥याउनु भएको छ नि उहाँले गरेको अहंकार, उहाँको कुत्सित मनसाय, उहाँको सनक । उहाँको निरंकुशतातर्फ जाने मनोवृत्ति र त्यसले जनताको प्रतिनिधिमुलक थलो विघटन गर्ने काम गर्नुभयो, त्यसका अगाडि उहाँहरु (प्रचण्ड–नेपाल) ले गरेका कसुरहरु फिक्का भए । यी त इस्यु नै भएनन्’ झाँक्रीले भनिन् ।
बरु संसद पुर्नस्थापना भएको १० मिनेटभित्र नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई महाअभियोगबाट हटाइने चेतावनी उनले दिइन् । ‘संसद पुर्नस्थापना भएपछि खड्गप्रसाद ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ नैतिकताका आधारमा । राष्ट्रपतिले पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । हामी महाअभियोगको बाटो समातेर संसद भवनसम्म जान नपरोस्’, उनले भनिन्, ‘सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै आदेश आउँदा बित्तिकै उहाँहरु दुई जनाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ यदि नैतिकता छ भने । नैतिकता छैन भने नैतिक हरामहरुलाई फेरि घोक्र्ठ्याक लगाएर हटाउनुपर्छ ।’
झाँक्रीले सर्वोच्च अदातलले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थानिा गर्नेमा कुनै शंका नरहेको दाबी गरिन् । झाँक्रीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दुई तिहाई चाहिएको भन्ने दाबीप्रति व्यंग्य गर्दै भएको दुई तिहाई आगो लगाएर खरानी बनाउनेलाई जनताले दुई सिट पनि नदिने टिप्पणी गरिन् । ‘क्रियाकलाप र कर्मले उहाँलाई दुई सिट जित्न गाह्रो छ । कहाँ जित्नुहुन्छ ? दमकमा जित्नुहुन्छ ? उहाँ दमकमा जित्नुहुन्छ ? छँदाखाँदाको दुई तिहाई आगो लगाएर खरानी बनाउने, व्यवस्थामाथि अस्थिरता ल्याउने, आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई ५० वर्ष पछाडि धकेल्ने, कालो कर्तुत गर्ने अनि दुई तिहाई दिन्छन् जनताले ? जनता न्यामुर्ति हो । निर्णायक बेला भोट दिन्छ । त्यसैले कसैले गफ नदिए हुन्छ’, झाँक्रीले भनिन् ।
अब आफूहरुले काठमाण्डुमा ओलीविरुद्ध १० लाख नागरिक उतार्ने तयारी गरिरहेको झाँक्रीले बताइन् । खड्गप्रसाद ओली किन गलत छन् भन्ने पुष्टि गर्न आफूहरु सडकमा रहेको र त्यस क्रममा मानिस काठमाण्डुमा उतारिने उनको भनाइ थियो । फरक प्रसंगमा उनले राष्टपति संस्था आफ्नो समेत संघर्षको प्रतीक भएको बताउँदै त्यसप्रति सधैं सम्मान रहेको स्पष्ट गरिन् ।
तर, राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहने व्यक्ति संविधान र कानूनअनुसार नचले त्यसबारे बोल्न पाएने तर्क गरिन् । ‘राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहने व्यक्तिलाई संविधानअन्तर्गत प्रश्न गर्न पाइन्छ र तिनीहरु जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । हरेक संवैधानिक संस्थाले संविधान र ऐनको पालना गर्नुपर्छ’, झाँक्रीले भनिन्, ‘विद्या भण्डारीको क्रियाकलापप्रति, कृतघ्न खालको गुटबन्दीप्रति विरोध हो ।’ राष्टपति संस्थामाथिको सम्मान भइरहँदा राष्ट्रपति संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु पनि त्यत्तिकै सम्मान गर्न लायक हुनुपर्ने झाँक्रीले बताइन् । ‘यदि भएनन् भने तिनकामाथि प्रश्न गर्न, आलोचना गर्न र परिआयो भने तिनिहरुलाई कुनै कसुर लगाएर कारबाही गर्न पनि यो संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको छ’, उनले भनिन् ।
झाँक्रीलाई राष्ट्रपतिको मानमर्दन गरेको आरोपमा प्रहरीले बिहीबार बानेश्वरस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो । तर, चौतर्फी विरोधपछि सरकारले झाँक्रीलाई छाड्न आदेश दिएको थियो । झाँक्रीले आफू कुनै कागजमा सहीछाप गरेर नछुटेको दाबी गरिन् । ‘कागम गरेर होइन, संघर्ष गरेर छुटेको हो । यो पञ्चायती कालरात्री हो र ?’ उनको प्रश्न थियो । http://www.kathmandutoday.com/ बाट साभार गरीएको हो ।